About Us - Weihai Tonglian fametrahana mazava milina Co., Ltd
Karbaona fibre milina hafa
Weihai tonglian mpiara fitaovana fametrahana mazava tsara., Ltd no misy ao an-tanàna tsara tarehy amoron-tsiraka - Weihai tanànan'i faritanin'i Shandong. manokana eo amin'ny famokarana ny jono, Golf fitaovana orinasa mpamokatra entana, sy ny fahombiazan'ny fanitarana ny fampandrosoana ny savaivony fitaratra lehibe Tube, orinasa hafa karbaona boky Tube saha koronosy fitaovana. Mandritra izany fotoana izany fanohanana isan-karazany lasitra fototra, vy Accessories sy ny kalitao avo fanjonoana tehina.
Ny orinasa hatramin'ny fananganana tamin'ny 2001, araka ny rivotra sy ny orana ranonorana, tempering, kalitaon'ny vokatra azo ianteherana sy tsy fivadihana amin'ny fanompoana laza, mba ho ny mpitarika orinasa matihanina indrindra. Product be mpividy indrindra amin'ny firenena, ary naondrana any Japana, Frantsa, Syria, India, Vietnam, Taiwan sy ny firenena hafa sy ny faritra, ny tsena anjara-tampon'ny orinasa.
Tonglian sitrapony mba hiverina any mikolokolo "Tong Lian" mitombo sturdily ao amin'ny tany lonaky ny fomba fisainana eto, miaraka amin'ny zava-baovao vokatra, tsara kalitao sy tolotra vaovao hevitra, asa fanompoana eo amin'ny an-toerana jono indostria sy ny orinasa mitambatra sodina mpanamboatra, mba hampitombo ny fampandrosoana ny ny orinasa!
Taona 2018 dia mendrika miandrandra ny f ...
Tamin'ny niandohan'ny taona, dia efa hampidirina tao tsara fanombohana. Tamin'ny fiandohan'ny taona ity, ny orinasa iray vaovao lasa mandeha ho azy lacquering milina sary modely. Izany dia natao ho modely lacquer fanodinana. Tsy misy ...
Izahay Nahazo ny anaram-boninahitra hoe "specialization ...
Tamin'ny 19 Septambra, 2016 tao an-tanàna Weihai biraon'ny talen'ny Tsai, talen'ny iray amin'ireo teo-ny-toerana ny fanadihadiana ny orinasa, nitsidika ny orinasa amin'ny an-tsipiriany tehina fitaovana orinasa mpamokatra entana atrikasa, atrikasa orinasa mpamokatra entana bobongolo ny loza ...